LAMA DAFIRI KARO DOORKA AY SOMALILAND KU LEEDAHAY MARIN BIYOODKA GACANKA CADAN IYO BADA CAS | ToggaHerer
← Afhyeenka Guud Ee Xisbiga WADDANI Md.Barkhad Jaamac Batuun Ayaa Ka Hadlay Xadhiga Iyo Xukunka Ku Dhacay Wariye C.qaadir Coday Oo Ka Tirsan Tviga HC.
Sulddaan Qaabuuska Dalka Cumaan oo Geeriyooday iyo Sulddaan Haytham oo la Wareegay Xukunka Dalkaas. →
LAMA DAFIRI KARO DOORKA AY SOMALILAND KU LEEDAHAY MARIN BIYOODKA GACANKA CADAN IYO BADA CAS
Published on January 11, 2020 by Magan
Shir ka qabsoomay magaalada Riyad ee dalka Sucuudiga, ayaa si rasmi ah loogu saxeexay Axdiga lagu aasaasayo Golaha dalalka Afrika iyo Carabta ee wadaaga xeebaha Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed, golahaas oo ujeedadiisu tahay ilaalinta ammaanka iyo bad-qabka biyaha Badda Cas iyo Gacanka Cadan.
Waxa heshiiskan saxeexay Wasiirrada Arrimaha Dibadda dalalka Sucuudiga, Ereteriya, Yemen, Soomaaliya, Masar, Suudaan, Jabuuti iyo waddanka Joordan, iyadoo sida qorshuhu yahayna heshiiska axdigan loo gudbin doono kulan ay yeelan doonaan Madaxweyneyaasha iyo hoggaamiyeyaasha dalalkaas, kuwaasoo la filayo inay si rasmi ah u dhaqan-geliyaan.
Fikirkan lagu aasaasayo Gole lagu midaysan yahay oo ilaaliya amniga iyo danaha guud ee Badda Cas iyo Gacanta Cadan, waxa hindisihiisa lahaa, isla markaana dabada ka riixaya dalka Boqortooyada Sucuudiga, iyadoo uu qorshahaasi soo bilaabmay sannadkii 1956-kii oo hadda laga joogo muddo 64 sanno ah, waxaanna arrintan lagu falanqeeyey shir saddex-geesood ah oo lagu qabtay magaalada Jiddah, isuguna yimaadeen hoggaamiyeyaasha dalalka Sucuudiga, Masar iyo Yemen.
Hindisahan lagu samaynayo Golaha Iskaashi oo soo jiitamayey ilaa xiliyadaas, una taabo-geli waayey duruufo la xidhiidha arrimo siyaasadeed iyo khilaafyo lagu kala argti duwanaa, waxa haddana mar kale dib loo bilaabay shirar uu Sucuudigu ka shaqeeyey oo la qabtay sannadihii 1972-kii, 1974-kii, 1975-kii, 1976-kii, waxaana mar walba shirarkaas kala duwan lagaga hadlayey sidii loo samayn lahaa iskaashi guud oo khuseeya Badda Cas iyo Gacanka Cadan oo ah marin-biyoodyo muhiim ah oo isku xidha saddex qaaradood oo kala ah; Afrika, Aasiya iyo Yurub, iyadoo shirarkaas hore u qabsoomay uu ugu dambeeyey shir lagu qabtay magaalada Jiddah ee dalka Sucuudiga sannadkii 1982-kii, waxaanna heshiis guud oo shirkaas ka soo baxay wada saxeexay dalalka Sucuudiga, Jordan, Masar, Sudan, Yemen, Soomaaliya iyo Jabuuti, balse heshiiskaasi waxa uu ku dambeeyey fashil.
Qorshahan dhawrka jeer fashilmay, ayaa haddana mar kale dib u soo cusboonaaday sannadkii 2018-kii, waxaana dib u soo aakhiro-toosiyey dalka Sucuudiga oo qabtay shirar lagu aasaasayo Golahan aan lagala tashan dalka Somaliland, iyadoo uu shirarkaas ugu dambeeyey shirka ay 06/01/2020 magaalada Riyaad ku yeesheen Wasiirrada Arrimaha Dibadda dalalka wadaaga xeebaha Badda Cas iyo Gacanka Cadan.
Geesta kale, waxa sannadahaas lagu gudo-jiray hindisahan, waxa iyaguna socday oo saamayntooda xooggan lahaa mabaadii’dii Shuuciyadda iyo Hantigoosiga oo ay kala hoggaaminayeen dalalka ku bahoobay Isbahaysiga NAATO iyo Xulafada Waarso oo ay hormuud u kala ahaayeen Maraykanka iyo Ruushku, waxayna arrintaasi saamayn ku yeelatay dalalka Afrika iyo Carabta oo la kala saftay mabaadii’daas.
Haddaba, kala-qoq-qobnaantaas siyaasadeed, waxa ay keentay in quwadahaas waawayni ay ku hirdamaan wadammada Carabta iyo Afrika, kuwaas oo dagaalo badan dhex mareen, noqdayna kuwo kala aamin baxa, sidoo kale hirdankaas siyaasadeed waxa uu ragaadiyey danaha Sucuudigu ka lahaa inuu helo isbahaysi ay samaystaan dalalka wadaaga Badda Cas iyo Gacanka Cadan.
Qaaradda Afrika waxa ka jira urur-goboleedyo qaarkood ay khasab noqotay in lagu midoobo, taas oo ay ogaadeen in lagaga bixi karo dhibaatooyinka dhaqaale iyo siyaasadeed ee waddan walba goonidiisa u saameeyay, urur-goboleedaddan ayaa keenay wadammadii oo wadaagay siyaasadda, dhaqaalaha iyo is-dhexgal sababay in ay dhaqaalihii dalalkaas kobcaan, qaarkood ayaana yeeshay hal baasaaboor oo dadkooda u fududeeya in la wadaago, isdhex-gal ganacsi xor ah iyo khayraadka lagu kala duwan yahay.
Haddaba, dalka Somaliland waa waddan buuxiyay dhammaanba shuruudaha dalnimo, kaas oo lagu hal-beego in marka dal la sheegayo uu buuxiyo qodobbo dhawr ah oo ay ka mid yihiin;
1. Ma leeyahay xuduudo cayimman?
2. Ma leeyahay dad?
3. Ma leeyahay Xukuumad iyo Hay’ado sharci oo shaqaynaya?
4. Ciidan, calan iyo lacag u gaar ah.
Waxaa marag-ma-doon ah in ay intaasiba ka jiraan dalka Jamhuuriyadda Somaliland, waxaana u soo qabsoomay doorashooyin xor iyo xalaal u dhacay, waxaana ka jira xisbiyo qaran, Goleyaal qaran oo kala madaxbannaan, isna dheeli-tira.
Dalkan Somaliland mar haddii uu shuruudahaas oo dhan buuxiyay, waxa uu xaq u leeyahay in uu iibiyo oo ku gorgortamo muhiimadaha Allaah ku mannaystay iyo dhulkiisa juquraafi ahaan istaraatiijiga ah, sida xeebta ugu dheer qaaradda Afrika oo ka khayraad badan dalal badan, waxaa kaloo waddankan ku jira Saliiddo iyo macdano lingaxan oo aad loogu baahanyahay. Khayraadka kale ee wadamada dunidu baahida u qabaan waxaa ka mid ah Beeyada oo laga sameeyo quwadaha maanta lagu hirdamayo. Xoolaha nool iyo beeraha ayaa iyaguna ah waxyaabaha anfikara Urur-goboleedyada ama wadammada daneeya maalgashiga iyo ganacsigaba, waxayna Somaliland door weyn ku leedahay danaha iyo amniga Badda Cas.
Haddaba, golahan cusub ee la baxay Golaha Carabta iyo Afrika ee lagu ilaalinayo danaha guud ee Badda Cas iyo Gacanka Cadan, ayaa u muuqda inuu yahay mid iska indho-tiraya jiritaanka Somaliland iyo maamulkeeda sharci ee ay ku leedahay biyaha Badda Cas, waxaanan u sheegaynaa in ay hilmaameen cidda wax ku kordhin karta ee ay la wadaagi karaan xeebta Badda Cas ee ku dhereran Somaliland, halkaas oo juquraafi ahaan iyo xuduud ahaanba uu mulkiyaddiisa leeyahay dalka Jamhuuriyadda Somaliland.
Waxaa kale oo aan la iska indho-tiri karin in dhammaan dhulka Somaliland ay gacan buuxda ku hayeen dowladahii kala dambeeyay ee doorashooyinka is ku beddelay, kuwaas oo marnaba aanay ka dhicin ammaan xumo iyo dagaalo kooxeed, inkastoo ay mararka qaar jiraan rabshado dhul-daaqsimeed la xidhiidha oo ka dhaca degaanno ka mid ah Somaliland, haddana heshiisyo buuxa ayaa laga gaadhaa arrimahaas.
Qormadani waxay ku talinaysaa in madaxda qaranka ee hoggaanka inoo hayaa ay qaadaan olole lagu muujinayo, laguna iibinayo istraatijiyadaha ay nu ku leennahay Mandaqadda muhiimka ah ee Ilaahay innagu beeray iyo khayraadkeena dihin ee dhulka ka buuxa, waxaa kaloo innagu waajib ah in aan shaacino cududda buuxda ee aan ku hayno dhulkeena guud ahaan, iyadoo aanay ciidamo shisheeye iyo xulufooyin kale aanay gacan innaga siin faro ku haynta bug-caddeena ammaanka ah.
Aqoonyahanka, siyaasiyiinta, saxaafadda, qurbo-jooga iyo dadka la qadariyo ee bulshadeena waxaa waajib ku ah in in ay cod dheer iyo mid gaabanba ku sheegaan qaybta aynu u leenahay sharciyada xeebaha dhulkooda ku gedaaman iyo doorka shariifka ah ee ay ku horumarin karaan midawyada jaarka iyo mandaqadaba, kuwaasoo uu ugu horeeyo qorshahan uu Sucuudigu dabada ka riixayo.
Golahan isku-magacaabay Golaha Carabta iyo Afrika ee wadaaga xeebta Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed waxay u baahanyahiin in ay wajahaan xaqiiqda oo ay ogaadaan in Somaliland iyo Soomaaliya kala yihiin laba waddan oo walaalo ah, kuwaas oo midawgoodii ku kala noqday 31. May 1991, taasina ay ka dhigan tahay Somaliland leedahay, gacantana ku hayso xeebta Badda Cas sharci ama khariirad ahaanba, waana halkan dalka lagala xaali karaa xeebtan dheer ee ammaankeedu suganyahay ee marinka u ganacsiga adduunka.
Mustafe Maxamed Nuur Dheereeye